Gbasara Anyị | Wuxi Quanbang Energy Technology Co., Ltd
gị Position：Home>Gbasara anyị
Steam Air okpomọkụ
Mmiri / Fluid Air okpomọkụ
Mmiri / Fluid ngwa nju oyi
Wuxi Quanbang Energy Technology Co., Ltd bụ ọkachamara emeputa na ubi nke okpomọkụ mgbanwe na ike na-azọpụta ụlọ ọrụ. Anyị na-pụrụ iche na imewe na rụpụta nke finned tube okpomọkụ exchangers, ihe kacha anyị na ngwaahịa nkejikotara ikuku okpomọkụ, ikuku preheater, nku azu fan ikuku oyi, ntụ mma okpomọkụ Exchanger, evaporative ngwa nju oyi, condenser na okpomọkụ anwụrụ okpomọkụ Exchanger. Na otutu afọ nke ọkachamara ahụmahụ ndị na-imewe na n'ichepụta, anyị na ngwaahịa na n'ọtụtụ ebe etinyere na ọka na mmanụ mmepụta, ndepụta nhazi na ulo oru oku wdg
Anyị nwere a ìgwè ndị ọkachamara gụnyere imewe ọkachamara, engineer, ịgbado ọkụ ọkachamara na àgwà nlekọta. Anyị oru otu egwuregwu mejupụtara ọkachamara talent na ubi nke eletriki, HVAC, kwes na onwu. Anyị nwere eru imewe otu, bụ nke mere ka anyị na-enye emebere nkeonwe ezigbo amụma na n'ozuzu ike na-azọpụta amụma n'ihi na ndị ahịa.
N'okpuru nkà ihe ọmụma nke ahịa afọ ojuju, anyị na-arara nye elu àgwà ahaziri ngwaahịa na agbanwe agbanwe, ọbọ ọkwa kachasị elu nke ahịa afọ ojuju bụ anyị enweghi ngwụcha na-achụ na ndụ mgbaru ọsọ. Site na-agba ume na na eme anyị ndị mmadụ creativity na ịnụ ọkụ n'obi na ịga n'ihu ọsọ ọsọ na ọhụrụ na pụrụ iche ntụziaka, anyị na-agbalị na-edu otú na-ezute ndị dị iche iche chọrọ nke ndị ahịa. Quality, pụrụ ịdabere na ahịa afọ ojuju na-mgbe anyị isi ụkpụrụ na ndụ ọzọ.